Agwọ & Nọọsụ | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Nọọsụ Agwọ & Ọkachamara Ọkachamara
OKE AKWIGHKWỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKWLEKWỌ AKW OKWỌ AKW BYKWỌ AKW BYKWỌ AKWLEKWỌ AKW WORKWỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AH WHORUL ANDLỌ.
Ndị na-agwọ ọrịa ahụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ:
na-adụ ndị ọrụ klaasị na ndị nne na nna ọdụ na njikwa ụbọchị niile
ịhụ ụmụaka maka ọgwụgwọ na otu nnọkọ n'otu n'otu
bụ ọrụ maka ịkwaga na nkuzi agụmakwụkwọ
na-adụ ndị nne na nna na ndị nlekọta na ndị ọrụ ndụmọdụ na ngwa ọrụ pụrụ iche dịka ndị na-agagharị, ogwe osisi kwụ ọtọ wdg.
na-enye aka na nhazi nke Mmemme Mmụta Onwe na Mmụta, Ahụike na Nlekọta Nlekọta.
mmemme mmemme hydrotherapy
na-ahazi ụlọọgwụ ọdịnala na oche ọlụsị emere n’ụlọ akwụkwọ
Iji kpọtụrụ ndị na-agwọ ọrịa physio - 020 8368 5336 wee họrọ 5.
OT na-arụ ọrụ na Oakleigh na Acorn iji kwado ụmụaka iji nweta nsonaazụ EHCP ha. Na mgbakwunye na oke, Oakleigh na-arụ ọrụ nke ha nke na-eme nkwado OT pụrụ iche dịka enyere ya aka maka ụmụaka ọ bụla. Ndị nkuzi nwere ike ịtinye nwata gaa na OT maka nyocha.
OT na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ:
Programsmepụta mmemme nke OT nke nwere ike ilekwasị anya na ịkwalite nnwere onwe ụmụaka n'ihe omume ndụ kwa ụbọchị dịka nlekọta onwe onye ma ọ bụ iri nri ma ọ bụ ijikwa mmasị nke uche.
Ọkachamara ọkachamara na-ejikarị aka aka na-agbazi aka na-enye aka maka nkwekọrịta na mkpa aka.
Na-adụ ọdụ maka nhazi ọkwa maka ọrụ arụ ọrụ
Na-atụ aro oche ndị ọkachamara maka gburugburu klaasị.
Enwere ike ịkpọtụrụ OT na 020 8368 5336 wee họrọ nhọrọ 5. Ha ga-alaghachikwute gị ma ọ bụrụ na ha adịghị.
Okwu na ọgwụgwọ asụsụ na nkwukọrịta (SALT)
Okwu, asụsụ na nkwukọrịta na-eme n'ofe usoro ọmụmụ niile, ya mere ọ bụ akụkụ dị mkpa nke mmemme klaasị niile, ebe ọ bụ akụkụ nke ndụ n'ụlọ. Ya mere, ndị na-agwọ ọrịa na-eji ụfọdụ oge na-adụ ndị ọrụ klaasị ndụmọdụ, na-eme ihe ngosi, na-enye akụrụngwa ma na-atụ aro usoro kwesịrị ekwesị, yana iso ụmụaka na-arụ ọrụ.
A na-eji usoro 'nkwukọrịta' niile eme ihe na Oakleigh. Nke a pụtara na ụda olu, anya anya, akara Makaton, okwu ọnụ na ojiji nke usoro nkwukọrịta na-abawanye dị ka ụdị nkwukọrịta. Ihe akaebe na-egosi na usoro ndị a na-akwado karịa igbochi uto asụsụ nwata ma nye ụmụaka ohere ịkọrọ ha ihe mgbe ha na-agaghị enwe ike. Nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ịbanye Makaton, akara, enyemaka nkwukọrịta kọmputa, foto na ihe nrụtụ aka. A na-eji PECS (Sistemụ Nkwukọrịta Foto Foto) na akwụkwọ nkwukọrịta ọtụtụ ebe n ’ụlọ akwụkwọ ọ bụla dabara adaba. Gbaa mbọ hụ na ụmụaka niile nwere usoro nkwukọrịta bụ ebumnuche bụ isi maka Oakleigh School.
Ndị na-agwọ ọrịa ahụ kwa:
nyochaa ụmụaka, ozugbo na site na nyocha
hazie ma mepee mmemme yana nne na nna / ndị nlekọta na ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ
soro ndị nkuzi na-ezukọ oge iji kwado atụmatụ nke ebumnuche nkwukọrịta
hụ ụmụaka n’obere otu n’ime klaasị na otu, mgbe o kwesịrị ekwesị
na-enyocha ma chọpụta na usoro nkwukọrịta nwata kwesịrị ekwesị
kwuo maka nyocha ọzọ maka AAC dị elu gụnyere anya anya
nyochaa, nyochaa ma nye ndụmọdụ maka iri nri, ị drinkingụ ihe ọ ,ụ drinkingụ, ilo ihe ebe nsogbu ahụike dị, dịka dysphagia
Agbakwunyela ọrụ ọzọ na Okwu Nkwupụta Okwu na Asụsụ na Oakleigh kemgbe Septemba 2017, ụlọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ nke a naanị. EGO-GAZE PROJECT, nke a gụnyere Okwu Okwu Na-ekwu Okwu na Asụsụ na-eleta ụlọ akwụkwọ Oakleigh kwa izu na ụtụtụ Tọzdee iji tinye oge ọzọ: nyocha / ndụmọdụ / inye anya na-ele anya, maka ụmụaka ndị nwere ike irite uru site na ịnweta teknụzụ anya maka ihe na mmetụta / ịmepụta nkà ọhụụ / na-ekwurịta okwu site na teknụzụ anya.
Enwere ike ịkpọtụrụ ndị na-ekwu okwu na asụsụ na 020 8361 1993. Ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ugbu a site na Tuesday ruo Fraịde.
Budata klaasị na nkọwa kọntaktị maka ọgwụgwọ agwakọta (PDF)
Usoro ọgwụgwọ - usoro ọgwụgwọ / mmegharị na ọgwụgwọ egwu
Anyị nwere ụbọchị atọ n'izu nke Drama / Movement Therapy na ụbọchị abụọ n'izu nke ọgwụgwọ ọgwụ na Oakleigh School na Acorn. E debara aha ndị na-agwọ ọrịa abụọ na Health and Care Professions Council (HCPC) ma bụrụ ndị otu zuru oke nke ahụ ọkachamara ha (BADTH / BAMT).
A na-eji usoro ọgwụgwọ eme ihe iji nyere ụmụaka aka ịkọwapụta onwe ha, iji chọpụta nkwukọrịta n'ụzọ dị iche. A na-eji ihe nkiri, mmegharị na egwu dị ka asụsụ maka mmekọrịta dị n'etiti nwata na onye na-agwọ ọrịa. Ndị a nwere ike ịbụ ndị na-ajụ ase dị ike mgbe ha na ụmụaka nwere nsogbu anụ ahụ, mmụta ma ọ bụ nke mmetụta uche.
Mmekọrịta ọgwụgwọ dị oke mkpa. Ka nke a na-etolite, onye na-agwọ ọrịa ahụ ga-achọpụta ihe gbasara ike na mkpa nwatakịrị ahụ, na-eji ngwaọrụ okike iji gbasaa ahụmịhe ha ma gbalịa iweta uto na mgbanwe. Usoro ọgwụgwọ nka nwere ike inye ohere na ebe nzuzo ebe enwere ike ige ntị, gbaa akaebe, ịnakwere ma kwenye n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke a nwere ike ịmepụta ahụmịhe nke ịghọta ma jiri ya kpọrọ ihe, na ọkwa ọ bụla nke ike nkwukọrịta.
Ndị na-agwọ ọrịa na-enye usoro ọgwụgwọ otu onye, ​​otu na ezinụlọ. Nke a nwere ike ịbụ obere oge ma ọ bụ ogologo oge, dabere na mkpa nke ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ kwuru. Ọ bụrụ na ndị nne na nna / ndị nlekọta chọrọ ịkpọga ụmụ ha na ọgwụgwọ onwe ha, anyị nwere ike itinye nke a n'ime usoro iheomume mmadụ.
Enwere ike ịkpọtụrụ ndị na-agwọ ọrịa na 020 8368 5336 wee họrọ nhọrọ 5. Ha ga-alaghachikwute gị ma ọ bụrụ na ha adịghị.
Sophie onye ogwu ogwu anyi no na Monde & Tuesday na Jessica our Drama / Movement Therapist no ebe a na Tuesday, Wednesday na Thursday.
Nọọsụ Ụlọ Akwụkwọ
Anyị nwere nọọsụ nwere nsogbu mmụta nke na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ oge niile; ọ na-akwado ya otu ndị enyemaka enyemaka ahụike 2 ndị NHS Barnet were n'ọrụ.
Ọrụ ya bụ ịkwado ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ Oakleigh. Nọọsụ Schoollọ Akwụkwọ na-ejikwa ma mepụta atụmatụ nlekọta ahụike niile. Fọdụ Developmentlọ Ọgwụ Mmepe Childmụaka na-ewere ọnọdụ n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ wee kọọrọ ndị nne na nna / ndị nlekọta banyere nke a.
Otu Ndị Ọrụ Nlekọta Ọpụrụiche
Ọrụ a na-arụ ọrụ site na Cambridge Education na njikọ ya na Barnet Council.
Ndị otu a dabere na North London Business Park, Oakleigh Road South, New Southgate N11 1NP ma enwere ike ịkpọtụrụ site na e-mail na expert.team@barnet.gov.uk
Ndị nkuzi sitere na Ọrụ ahụ na-abata ụlọ akwụkwọ iji hụ ụmụaka nwere nsogbu isi ma ọ bụ ịnụ ntị, ma nye ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ ndụmọdụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.